‘राम्रो चलचित्र बनाएर मात्रै नहुने रहेछ’
२०७४ श्रावण २ सोमबार १३:३९:००
नेपाली चलचित्र उद्योगमा अहिले वार्षिक सयको हाराहारीमा चलचित्र प्रदर्शन हुन्छन् । जसमा मुस्किलले आधा दर्जनले मात्रै राम्रो व्यापार गर्छन् । आधा दर्जनकै हाराहारीले लगानी उठाउँछन्, बाँकी सबै घाटामा जान्छन् । यसको मारमा चललचित्रकर्मी विशेषतः निर्माताहरु पर्ने गरेका छन् । चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले चलचित्र उद्योग नै आक्रान्त बनेको छ । गएको शुक्रबार रिलिज भएको चलचित्र ‘सायद–२’ का निर्माता तथा कलाकार सुनिल रावलसँग योसँगै उनको चलचित्र ‘सायद–२’ का विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका लागि नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीः
चलचित्र ‘सायद–२’ प्रदर्शनमा छ । कत्तिको दौडधुप छ ?
आफूले बनाएको चलचित्र भएकाले प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्नेहुँदा पनि दौडधुप नै छ ।
कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
यो त मलाई भन्दा पनि तपाईंहरुलाई बढी थाहा होला । मैले अगाडि बनाएका ‘सायद’, ‘होस्टल’ र ‘होस्टल रिटन्र्स’ जस्तै यसमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सबैले राम्रो भनिरहनु भएको छ । फेसबुक, म्यासेज तथा भेटघाटमा पनि तपाईंले आफ्ना पुराना चलचित्रजस्तै राम्रो चलचित्र बनाउनु भएछ भनिरहनु भएको छ ।
भनेपछि हलमा अकुपेन्सी पनि त राम्रो होला ?
इमान्दार भएर भन्दा प्रतिक्रियाअनुसारको अकुपेन्सी भने छैन । हलमा अपेक्षा गरेअनुसार दर्शक आउनु भएको छैन ।
चलचित्र राम्रो भन्ने प्रतिक्रिया आएपछि त अकुपेन्सी पनि राम्रो हुनुपर्ने होइन र ?
हो । तर जसरी मेरा अन्य चलचित्रमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो, त्यो अनुपातमा दलमा दर्शकको संख्या छैन ।
सायद दर्शक झुक्किनुभयो ।
अहिले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ चलिरहेको छ । ‘प्रेम गीत–२’ भनेर त्यो चलचित्र हेर्न गइरहनु भएको छ दर्शक । त्यसको असर ‘सायद–२’ लाई परिरहेको छ ।
कमजोरी कसको त उसो भए दर्शक कि निर्माता निर्देशकको ?
दर्शकलाई म दोष दिन्न । सायद हाम्रै होला । हामीले ‘सायद–२’ आउँदैछ है भनेर जति प्रचार गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेनौं कि !
पब्लिसिटीमा हामी कम खर्छ गर्छौं । त्यसको परिणाम हो उसो भए ?
म पब्लिसिटीमा पनि मोटो रकम खर्च गर्नेमान्छे हुँ । गरेको पनि छु । तर म यो बीचमा अर्को चलचित्र ‘लाउरे’ को स्क्रिप्ट र सुटिङमा लागेँ, त्यही भएर ‘सायद–२’ भन्दा पनि यो नयाँ चलचित्रको बढी प्रचारप्रसार भयो । ‘सायद–२’ लाई ‘लाउरे’ले ओझेलमा पारे जस्तो लाग्यो ।
चलचित्र प्रचारप्रसारको काम त वितरकको होइन र ?
हो । तर, नेपालमा कहाँ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सबैले काम गर्छन् र ? वितरकले प्रचारप्रसार त के राम्रोसँग हलमा लाउँदा पनि लगाउँदैनन् ।
बलिउड, हलिउड चलचित्रले चलचित्रको कुल लागतको ५० प्रतिशत पब्लिसिटीमा खर्च गर्छन्, हामी त २५ प्रतिशत पनि गर्दैनौं नि !
हो । ५० प्रतिशत त हामी खर्च गर्दैनौं । म भने राम्रै खर्च गरिरहेको हुन्छु । नयाँले पुरानो ओझेलमा परेको हो यो पटक ।
फेस भ्यालु बोकेको कलाकार तपाईंको चलचित्रमा छैनन् । त्यो पनि कारण हो कि ?
हुन सक्छ । तर मेरा अघिल्ला तीन वटा चलचित्रमा पनि पुराना चलेका अनुहार कोही थिइनन् । एक दर्जनभन्दा नयाँ अनुहारलाई मैले नेपाली चलचित्र उद्योगमा ल्याइसकेको छु ।
भनेपछि अब आउँदा तपाईंका चलचित्रमा नयाँ अनुहार भन्दा पनि पुराना अनुहार देखिन्छ ?
त्यो सम्भावना छ । किनभने मैले अगाडिका भन्दा राम्रो चलचित्र बनाउँदा अपेक्षित चलेन भने मैले रिस्क किन उठाउने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
तपाईं सुरुमा नयाँलाई हामीले ब्रेक दिएनौं भने नयाँ कलाकार कसरी आउँछन् भन्नुहुन्थ्यो हैन ?
हो । मलाई यो चलचित्रमा आइपुग्दा उहाँहरु सही र म गलत रहेँछु कि भन्ने लागिरहेको छ ।
कथावस्तु के छ ‘सायद–२’ मा ?
अहिलेको युवा पुस्ताको समसामयिक कथावस्तु छ । हरेक व्यक्तिका लागि भनेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो । किनभने हामी सबैले टिनएज पार गरेर आएका छौं । त्यसैले यो सबैको कथा हो । अन्य चलचित्रमा अब के हुन्छ भन्ने १५ मिनेट अगाडि नै थाहा हुन्छ, तर मेरो चलचित्रमा फिल्म सकिएको १५ मिनेटपछि मात्रै थाहा हुन्छ चलचित्रमा यो ट्विस्ट किन भयो भन्ने ।
तपाईंको कुरालाई मान्ने हो भने राम्रो चलचित्र बनाएर मात्रै हुँदैन रहेछ हैन ?
यो त देखियो नि । सबैले राम्रो भन्ने तर हलमा नजाने । दुर्गिश ब्यानरले राम्रा चलचित्र दिन्छ दर्शकलाई ठग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि दर्शकको साथ नपाउँदा राम्रो चलचित्र बनाएर मात्रै नहुने रहेछ भनेर म जत्तिको प्रोड्युसर पनि हच्किने अवस्था आयो ।
कमजोरी कसको त ?
दर्शकलाई दोष दिने कुरा भएन । हामीले सायद चलचित्र प्रदर्शन, निर्माण अगाडि पर्याप्त रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकेँ मैले ।
अपेक्षित चलचित्र जुधाउनुलाई कमजोरी स्वीकार्नु हुन्न ?
मैले एक वर्ष पहिला डेट लिएर बसेको हुँ । ६ महिना पछाडि बनेको चलचित्र म सँगै रिलिज हुन आउँछ भने कमजोरी उसको हो । मेरो हैन । यसले राम्रा चलचित्र बनाउँछ अब यसको ब्रान्ड खुइल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छन् नि हैन र ?
अब चलचित्र विकास बोर्डका विषयमा कुरा गरौं ।
गरौं र नगरौं होला ।
मलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि संघसंस्थाका बारेमा कुरा गर्न मन लाग्दैन ।
किन यति धेरै असन्तुष्टि ?
काम गरेको हुनु पर्यो नि विकारबोर्डले चलचित्रका बारेमा काम नै गरेको छैन भने के कुरा गर्नु ।
चलचित्रकर्मीहरुको त अभिभावक हो नि हैन ?
हो । तर, अभिभावक भएपछि अभिभाकको भूमिकामा पनि निभाउनु पर्छ नि ।
चलचित्रको उत्थानका लागि केही काम गरेको छैन बोर्डले ?
खै मलाई त गरे जस्तो लाग्दैन ।
तस्बिरः सुनिलको फेसबुकबाट
'इमोशनसँग खेलेर काम गर्न गाह्रो छ'